“धर्तिमाताले त’र बार देखाए पछि पत्रकारको भा’गभाग( भिडियो सहित):: Mero Desh
“धर्तिमाताले त’र बार देखाए पछि पत्रकारको भा’गभाग( भिडियो सहित)
Published on: ९ बैशाख २०७८, बिहीबार ०२:०७
काठमाडौ। बु’टबल घर भएकी विष्णु कुँवर अर्थात् ध’र्ती माता पहिले क’लाकार थिइन्। उनी कलाकारितामा जम्न नसकेपछि माता बनेर युट्युवमा पहिलेदेखि चर्चामा रहेकी थिइन्।पछिल्लो का’ण्डबाट उनी अहिले फे’सबुक तिर पनि चर्चामा छिन्। रेसु’ङ्गामा तीन महिना क’ठिन त’पस्या गरे पछि ज्ञा’न पाएँ।अहिले सफल भएकीछु।दिनमा मलाई भेट्न आउने भक्तजनको संख्या गनेर साध्य छैनधर्ती माता ले भनिन्।
गुल्मीको ईस्मा गाउँपालिका–२ का व’डाध्यक्ष टीका रेश्मी उनको जन्म घर सोही वडा सा’विक हस्तीचौर गाविस ८ मा रहेको पालुखाको पनाह टोल रहेको बताउँछन् ।उनकी आमाको मृ:त्यु भइसकेको छ उनले बा’बुको नाम स’ञ्चार माध्यममा गो’प्य राख्दै आएकी छन् ।उनीहरुको परिवार बसा’इसराइ गरेर रुपन्देहीतिर गएको ८ ९ वर्ष भएको उनका दाजु पर्ने पनाहका बलभद्र कुँवरले जानकारी दिएका छन् भिडियो हेर्न समचारको अन्तमा जानुहोस्
यो पनि चर्चित ना’यिका केकी अधिकारीले आफू अहिले विवाह गर्नको लागि मान’सिक रुपमा त’यार नरहेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्र’सारण भ’एको एक धम’लाको हम’लामा पत्रकार ऋषि धम लासँग कुरा गर्दै नै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
यद्धपी आफूलाई घरपरि’वार बाट भने वि’वाहको लागि आग्रह भैरहेको उनले जानकारी दिईन् ।उनले अझै केही वर्ष विवाह नगर्ने स्पष्ट पारिन् ।उनले भनिन्,‘विवाह गर्नुत छँदैछ, विवाह मनपर्ने संस्था हो त्य’सपछि जी’वन अ’गाडि बढ्छ ।उनले आफूले असल जीवनसाथी खोजेको सुनाईन्
उ’नले आफू क’हिल्यैपनि भूत र भविष्यमा नअल्झिने बरु वर्त’मानमा केन्द्रित रहने व्यक्ति भएको पनि सुनाईन् ।पत्र कार धमलाले ‘अब त’पाईँले प्रेम गर्दा कस्तो युवक सँग गर्नुहुन्छ ? तपाईँको सोच ?’भनेर राखेको प्रश्नमा नायिका अधिकारीले भनिन्–‘मलाई एकदमै प्रेरणा दिने व्यक्ति मध्ये मा तपाईँ एक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ।
सायद मेरो श्रीमानमा तपाईको केही गुण चाहन्छु । आफ्नो श्रीमतीलाई निकै नै विश्वास गर्ने, ।सपोर्ट गर्ने, उहाँले गर्न चाहेको सपनामा उ’हाँलाई चा’हीँ पुस गर्ने,तपाईमा भएका त्यस्ता गुणहरु पक्कैपनि म मेरो श्रीमानमा चाहन्छु । हाम्रो नेपालमा भएका विवाहित जोडीहरुमध्येमा तपाईका धेरै गुणहरु धेरै श्रीमानहरुले सिक्न आ’वश्यक छ ।
श्रीमतीहरुले पनि त्यो चिज सिक्न आवश्यक छ ।भिडियो सहित भिडियो हेर्न अर्को समचारको अन्तमा जानु होस।यो पनि बजाज अहिले मो’टरसाइकलको सबै भे’रियन्टको मूल्य बढ्दा यस पटक एउटा भेरियन्टको मूल्य घटेको छ । बजाजको आ”धिकारीक विक्रेता हंशराज हुलास चन्द..!
एण्ड कम्पनी प्रालिले विक्री गर्दै आएको पल्सर १५० को मूल्य घटाएको छ । नेपालमा विक्री हुने १५०सीसी सेग्मेन्ट मा बजाज पल्सर १५० को हिस्सा करिब पचास प्रतिशत रहेको छ ।“यस्तोमा कम्पनीले यसको मूल्य घटाएर बजार मा आफ्नो पकड अझै बलियो बनाउन चाहेको देखिन्छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि अनुसार नै यस वर्ष धेरै मूल्य बढाउनु पर्ने अवस्था आयो । यस्तोमा उत्पादक कम्पनीसँग नै पहल गरेर हामीले पल्सर १५० मा मूल्य घटाएका हौं’ कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन स्रोतले मेरोअटोसँग भन्यो ।
यो पनि , नयाँ स्मार्टफोन नोकिया १.४ सार्वजनिक, यस्तो छ मूल्य र विशेषताहोम्स एचएमडी ग्लोबलले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन नोकिया १.४ सार्वजनिक गरेको छ । ६.५१ इन्च इड्ज–टु–इड्ज सम्म फैलिएको यो स्मार्ट फोन नोकिया १ सिरिजकै सबैभन्दा ठूलो भएको एचएमडी ग्लोबलका हेड अफ पान एसियाका रवि कुँवरले बताए ।
नयाँ विस्तारित एचडी प्लस स्क्रिन भिडियो कलिंग एपको साथ आउने भन्दै उनले जुन परिवारलाई वर्तमान अवस्था को बीचमा जडित रहन मद्दत गर्ने बताए ।गुगलको क्यामेरा गो एपमा जडित डुअल क्यामेरा सेटअपले कुनै पनि समय मा तथा कम प्रकाशको अवस्थाहरूमा समेत उच्च गुणस्तर को फोटोहरू लिन मद्दत गर्ने उनले बताए ।
‘क्यामेरा गो एप र नोकिया १.४ को डुअल रियर र फ्रन्ट–फेसिंग क्यामेराको शक्तिशाली संयोजनले परिवारको अन मोल यादहरूलाई आश्चर्यजनक बोकेह पाट्रेट र कमप्रकाश सुन्दर शटहरूमा खिच्दछ । ब्लर पृष्ठभूमिमा प्रोफेशनल फोटोहरू खिच्न पाट्र्रेट मोडको साथ बहुमूल्य पारिवारिक क्षणहरू क्याप्चर गर्नुहोस् ।
र, कलर रिच तथा र क्रिप्स कम–प्रकाश शटहरू लिन फ्ल्याशको आवश्यकता बिना नै नाइट मोड प्रयोग गर्नुहोस् । सहयोगी स्टोरेज सूचकहरूले स्पेसको सबै चिन्ताहरु ह्टाउछ ताकि तपाईं स्न्यापलाई जारी राख्न सक्नुहुन्छ’, कम्पनीले भनेको छ ।श्रोत कान्तिपुरएनपी
यो पनि हेर्नुहोस् पछिल्लो समय चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीको चर्चा थप चुलिएको छ । एक पछि अर्को चर्चित गीतमा छाएकी अञ्जली ले बोलमाया, गलबन्दी पछि पछाडी फर्केर हेर्नु परेको छैन । यसैबिच नयाँ वर्षको अ’वसर पारेर लो’कदोहोरी गा’यक बैकुण्ठ महत र
गायिका एवं उद्घोषीका शितल शर्माले बजारमा ल्याएको
“उपहार ‘पिरतीमा ए प्लस’मा पनि”अञ्जलीकै अभिनय रहेको छ । जसमा अञ्जली अधि’कारीसँग अर्जुन गौतमले अभिनय गरेका छन् ।गीतकार रमेश बिजीको शब्द सिर्जना रहेको उ’क्त गीत’मा गायक महतले नै संगीत भरेका हुन् ।प्रिज्म स्टेडियोमा रेकर्ड गरिएको।
गीतका कृष्ण बिक‘भान्जा’ को संगीत संयोजन रहेको छ । गीतमा अन्य गायक गायिकाहरु गोविन्द अनेक, पदम ल्वागुन, स्मृती शा’ही र आकृति विश्वकर्माले पनि बैकुण्ठ र शिलतलाई आवाजमा साथ दि’एका छन् ।मौसम हिमाली ले निर्देशन गरेको भिडियोलाई क’रण चैसीरले छायांकन गरेका हुन् ।
मनोज कार्कीले स’म्पादन गरेको उक्त गीतको भिडियो गायिका शितल शर्माकै युट्युब च्या’नलमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । गीतको शब्दमा विद्यार्थी जीवन र माया प्रेम का विषयलाई कलात्मक तरिकाले उठाइएको छ । जुन भिडियोमा हेर्दा हरेक युवायुवतीले आफ्नै कलेज लाइफका दिनको याद गर्नेछन् ।